Tu Maung Nyo – ဗမာနိုင်ငံ နဲ့ မြန်မာလူမျိုး | MoeMaKa Burmese News & Media
တူမောင်ညို - အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လျှောက်သော လမ်း
ကျော်နိုင် - YBS ထက် အဆများစွာ အရေးကြီးသော စည်ပင်ဥပဒေ
“မြန်မာလို့ခေါ်ရင်အစပထမလူမျိုးကိုပဲခေါ်တာဖြစ်တယ်။ နောက်တစ်နေရာ တစ်နေရာတည်းမှာပဲ မြန်မာတွေအနေကြာတော့ သူတို့နေတဲ့ နေရာကိုပါ မြန်မာစု၊ မြန်မာရွာ၊ မြန်မာပြည်လို့ခေါ်တယ်၊ မွန်ကျောက်စာ (ခရစ် ၁၁၀၂ ) ထဲမှာ မြန်မာ ကို မိရ်မာ (မွန်ကျောက်စာ ၉ခ/၄၂၊ဒီ ၂၄၊ အိပ်ခ်ျ ၁၂) လို့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်။ ထိလိုင်မင် (၁၀၈၄ – ၁၁၁၃) လက်ထက် နန်းသစ် ဆောက်တဲ့ အခါ မွန်၊ ပျူနဲ့ မိရ်မာ လက်သမားတွေပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒါ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျောက်စာတွေထဲမှာ အစောဆုံးတွေ့ရတဲ့ မြန်မာ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်”
တို့ဗမာ အစည်းအရုံးသည် မူလတည်ထောင်စဉ်မှစ၍ သမိုင်းတလျှောက်လုံး လူမျိုးစုအားလုံး၏ ညီညွတ်ရေးကို အလေး ပေးခဲ့ကြောင်း၊ “တို့” ဟူသောစကား၊ “ဗမာ”ဟူသောစကား၊ “ဗမာနိုင်ငံ၊ ဗမာပြည်” ဟူသော စကားတို့ကို တီထွင်၍ တိုင်းရင်းသား စစ်စစ် ဟူသော အမည်နာမ တပ်ဆင်ခဲ့ဖြင့် သိသာထင်ရှားပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုသည်မှာ မြန်မာပဒေသရာဇ်များက ပေးသောနာမည်ဖြစ်သည်။ မမှန်ကန်။ ဗမာနိုင်ငံသည် မြန်မာလူမျိုး တမျိုးတည်းနေထိုင်သော နိုင်ငံမဟုတ်။ ကချင်၊ ကရင်၊ ကယား၊ ချင်း၊ တောင်သူ၊ ပအိုး၊ ပလောင်၊ မွန်၊ မြန်မာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ နေထိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို မြန်မာပြည်ဟုမသုံး၊ ဗမာနိုင်ငံ ဗမာပြည် ဟုသုံး သည်။ သို့မှသာ ညီညွတ်မှန်ကန်မည်။ ဗမာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို ဗမာဟုခေါ်သည်။
ကိုတိတ်ဂွမ် (ရန်ကုန်)၊ ကိုဇေယျခေါ် အင်ပီး (မြောင်းမြ)၊ စူးတူး (ခေါ်) ကံဆင့်(မြောင်းမြ)၊ ချိန်တိတ်(ညောင်ဦး)၊ ဂင်စိန်(မြိတ်) စသော တရုတ်အမျိုးသားများသည် သခင်တိတ်ဂွမ်၊ သခင်ဇေယျ၊ သခင်ကံဆင့်၊ သခင်ချန်တိတ်၊ သခင်ဂင်စိတ် စသဖြင့် သခင်ဘွဲ့ခံယူပြီး တို့ဗမာအစည်းအရုံးတွင်ဝင်ရောက်ကာ တိုက်ပွဲအမျိုးမျိုးကို ဆင်နွှဲခဲ့ကြသည်။
– ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂ (ဗကသ)
– ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗကပ)
– ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမားအစည်းအရုံး — သဖြင့်ဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ သမိုင်းအချက်အလက်များ တိတိကျကျ၊ ထင်ထင်ရှားရှားရှိခဲ့ပါလျက် (နဝတ-နအဖ) စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် ယင်းကဲ့သို့သော သမိုင်းအချက်အလက်မှန်များကို ပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုး ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထင်သလိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ တကယ်တော့သမိုင်းကို သမိုင်းအချက်အလက်တွေကို ဖျောက်ဖျက်နေခြင်း၊ ဖျက်ဆီးနေခြင်းသာဖြစ်သည်။
ထိုပဒေသရာဇ်များသည်သူတလူငါတမင်းဖြင့် အဖကိုသားသတ်၊ ညီကအကိုကိုသတ် စသဖြင့် သွေးခင်း၍နန်းလုခဲ့ကြသည်။
လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာကြီး၊ တပ်မတော်ဖခင်ကြီးဟု လက်ရှိအစိုးရ “ပါးစပ်”က ပြောနေသော်လည်း နေပြည်တော်တွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းရုပ်ထု မရှိပါ။ ငွေစက္ကူများတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဓါတ်ပုံထည့်သွင်းရိုက်နှိပ်ခြင်းမရှိပါ။
– တို့ဗမာအစည်းအရုံးသမိုင်း (ပထမတွဲ) ပထမအကြိမ်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ၁၉၇၆
– ဒေါက်တာသန်းထွန်း- မြန်မာသမိုင်းရှာတော်ပုံ ပထမအကြိမ်၊ ၂၀၀၃၊ အောက်တိုဘာ၊ ဒေါင်းစာပေ
14 Responses to Tu Maung Nyo – ဗမာနိုင်ငံ နဲ့ မြန်မာလူမျိုး
မောင်ပျာလောင် on June 30, 2012 at 5:16 am
ဆရာညို ရဲ့တင်ပြမှုများသည် ရာခိုင်နှုံးပြည့်မှန်ပါသည်၊ သို့ သော် မှန်တိုင်းလည်း လူအများစု ကမသုံးပါ။ ဥပမာ တစ်ခုပြောရလျှင် မြန်မာ့စွယ်စုံကျန်းမှာကော၊ နေ့ စဉ်သုံး စာဆောင်တွေမှာကော သုံးနေသည့် – ကြက်တောင် ရိုက်ကစားခြင်း – ဆိုသည်မှာ တကယ်တော့ ကြက်တောင်မဟုတ်ပါ၊ ဘဲ အတောင် ဖြင့်သာလုပ်ထားသောကြောင့် – ဘဲတောင်ရိုက်ကစားခြင်း – လို့ သာခေါ်သင့်ရေး သင့်ပေမဲ့လည်း အများကခေါ်သလိုသာရေးသားရပါမည်။ ကျနော့ ဆိုလိုရင်းကတော့ အရေးကြီးတဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြု စာလုံးအတွက် အများပြည်သူများရဲ့သဘောထားကိုယူသင့်ပါတယ်။ ပညာရှိများက မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကျောင်းကို ချပြပါ၊ နောက်ဆုံးမှာတော့ ပြည်သူရဲ့ အဆုံးအဖြတ်သာလျှင် အတည်ပြုရပါမည်။ အမေစုကလည်း ဒီလမ်းကျောင်းကိုညွှန်ပြထားပါသည်။
witmone on June 30, 2012 at 12:08 pm
I will discuss in English usage of “Myanmar” and “Burma”.. No discussion in Burmese word.
Change name is the most easiest work for idiot leaders to do. after 8888 killing to students and people, Idiot Generals nothing to do and “simply Change the country name”…..
Now, Myanmar Airway .. flight number is still using UB “Union of Burma” because international document update is NOT so easy. Example, I can change my name but I have to change my name in Degree certificate and birth certificate ..etc.
Like that, Kachin people also want to change their state name to “Jingphaw”. Thailand real name is “Siam” .. China real name is “Sino” and Japan real name is “Nippon”.. Indonesia aslo Malayu… etc.
Now, world people call us Myanmese, Myanmarese and governmant is to educate the tourest who come to Burma. “country name is Myanmar and people living also called Myanmar”… Of course, tourists are confused. They prefer to call Myanmese … ha ha..
Finally, you can say that I am starborn ..
Country name is Burma
People name is Burmese ….
aungkyisoe on July 1, 2012 at 11:33 am
Kaung Htet on July 1, 2012 at 3:57 pm
Absolutely correct, Witmone… your idea is brilliant.
နဂါးမာန် on June 30, 2012 at 12:16 pm
လေးစားပါတယ်ဆရာညို ကျေးဇူးလည်းအရမ်းတင်ပါတယ် ဒီနေ့ပြန်လာမယ့် အမေစုကို ဒီဆောင်းပါးလေးက ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုလိုက်သလိုပါပဲ ဆရာညိုရေ……
သမိုင်းကိုသစ္စာဖေါက် သမိုင်းကိုကွက်လပ်ချန် ဇောက်ထိုးလုပ် အမျိုးမျိုးယုတ်မာခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်တွေရဲ့
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန် တာဝန်မဲ့မှုတွေကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကလူတွေ အထူးသဖြင့် ဗမာလူငယ်တွေသိနိုင်ဖို့
မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာပါပဲ…..(ဆရာ့ဆောင်းပါးလေး share ခွင့်ပေးပါနော်)
ပီစိ on June 30, 2012 at 1:38 pm
ကျော် on June 30, 2012 at 8:06 pm
ကိုယ့်လူ မောင်ပြာ(ပျာ)လောင် ။ သတ်ပုံတော့ မှန်ကန် အောင်လုပ်စမ်းပါဗျာ။စိတ်ညစ်လွန်းလို့ ။
မောင်ပျာလောင် on July 1, 2012 at 6:38 am
အထက်က ပညာရှိကြီး ဦးကျော် ရယ်၊ မောင်ပျာလောင် ဟာ စပယ်ရာတစ်ယောက်ပါ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတောင် ပြီးအောင်မနေခဲ့ရပါ။ ဒါပေမဲ့ ပညာယှိ ဘဘကြီးနဲ့တိုင်ပင်တော့။ ကဲဒီမှာစာတွေရှိတယ် ဖေါ်ပြလိုက်တဲ့၊ အမှားအမှန်ကိုတော့ စာရှုသူတွေကဝေဖန်လိမ့်မယ်တဲ့။
၁။ ။ လက်စွဲ – မှန်ပြ၊ မြန်မာဝေါဟာရသတ်ပုံ (ရေးသားသူ ဦးအုန်းရွှေ) စာမျက်နှာ ၂၁၉ မှာအောက်ပါအတိုင်းဖေါ်ပြထားပါသည်၊
ပျာ၊ ၊ ပျာပျာသလဲ၊ ကပျာ-ချောက်ချက်၊ ကရာ၊ ကသီ၊ ထိတ်ထိတ်ပျာပျာ၊ သုတ်သီးသုတ်ပျာ၊ ပျာတောက်ပင် (ပိတောက်)၊ ဆိုပြီးဖေါ်ပြထားပါတယ်။ မောင်ပျာလောင် ဟာ ပျာပျာသလဲ အမြဲဖြစ်နေလို့ လှည်းတန်းဈေးအရှေ့ ကလူတွေက ခေါ်မှည့်ထားတဲ့ အမည်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီ ကမှ အပြာရောင်သန်းနေတဲ့ စပယ်ရာကလေး၊ မောင်ပြာလောင် လို့ ရေးရမယ် ဆိုပြီး ဥပဒေနဲ့ ပြဋ္ဌာန်းထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ အောက်မှာ ရှင်းပြထားတဲ့ ပြာ ကတော့၊
ပြာ၊ ၊ အရောင်၊ အသံ-ပြာ၊ စဖိုပြာ၊ – – -၊ ပြာဋိဟာ၊ ပြာသာကွက်၊ ပြာသာဒ်၊ ပြာသိုလ၊ – ငွေအသပြာ၊ ဆပ်ပြာ၊ ဆန်ပြာသည်၊ ငှက်လင်းပြာ — စသည်ဖြင့် ရေးထားတဲ့အထဲက၊ ကျနော်နှင့် ကိုက်ညီတာ မွဲပြာကျ တယ်ဆိုတဲ့ သတ်ပုံတစ်ခုသာမှန်ပါသည်။
ထပ်ပြီးရှင်းရရင်၊ ၊မြန်မာစာအဖွဲ့ မှ ထုပ်ထားသော၊ မြန်မာ – အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်၊ Myanmar – English Dictonary, page 280 မှာရေးထားတာကတော့
ပျာ/ pja/ v be inaflurry ; be flurried ; be flustere, ပျာကလတ်၊ ပျာကသီ၊ ပျာပျာသလဲ၊ ပျာယာခတ်၊ ပျာယီးပျာယာ၊ ပျာလောင်ခတ်၊ စသည်ဖြင့်ရေးထားတာကြောင့်၊ မောင်ပျာလောင် ကို -ပျာ- နှင့် စာလုံးပေါင်းမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားစူးပါစေ့ မောင်ပျာလောင် ဟာ အပြာရောင်လမ်းကိုမလှန်းမိပါ၊ အမြဲ မွဲပြာကျနေတာကြောင့်ပါ၊ ခရိုနီကြီးတွေနဲ့ တွေ့ တော့မှ လမ်းအပြာ ကလေးအကြောင်းမေးကြည့်ပါ့မယ်။
Maung Maung Myint on June 30, 2012 at 11:19 pm
SLORC/SPDC government stated that the “Burma” isacolonial name, which is not true.
In ancient and current Indian languages, our country was/is called “Ba-r-ma” and our people “Ba-r-mi”. Thai people also call our country and people “Pha-Ma”, which is similar to “Ba-Ma”. It shows that the name Burma was notacolonial name, butaname recognized by its neighboring countries since ancient times.
ပုဆိန်ယိုး on July 1, 2012 at 4:02 am
ဘောင်းဘီချွတ်အစိုးရဟာအငြင်းအခုန်လုပ်ဖို့ ၊အာဏာပြဖို့ နဲ့ ဆရာဂြီးလုပ်ချင်တာပဲသိတယ်၊အရည်အ
ချင်းကတော့ထဘီဝတ်ကိုတောင်မမီဘူး၊ဒါနဲ့ များတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ချင်သေးတယ်။နှစ်ပေါင်း၂၀ကျော်အာဏာကိုခိုးယူထားတဲ့အလီဘာဘာနဲ့ ခိုးသားလေးဆယ်၊မင်းတို့ ဟာတရားမလွန်ဘူးလား။တိုင်းပြည်ကိုလည်းမအုပ်ချုပ်တတ်၊နိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေလည်းလိုချုင်၊အာဏာလည်းလက်မလွတ်ချင်၊နောက်ဆုံးအကြံကုန်တော့မတူတာတွေဘေးဖယ်၊တူတာတွေပူးပေါင်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုပြန်ထူထောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံနဲ့ ထဘီအောက်ဝင်ခိုခဲ့တယ်။ခုအကူအညီတွေလည်းရရောဒါမလုပ်ပါနဲ့ ဟိုဟာမလုပ်နဲ့ 
ဒီတခေါက်ပြည်သူတွေအုံကြွလာရင်မင်းတို့ စစ်ဘီလူးတွေအရင်ကလိုလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ မရတော့ဘူး
နားလည်လား။မင်းတို့ အခုပြန်ကပ်နေတဲ့မင်းတို့ ရဲ့ ကယ်တင်ရှင်၊အမေရိကန်ကကဒါဖီပြီးရင်ဘယ်အာ
ဏာရှင်ကိုဖြိုပစ်ဖို့ သူတို့ မှာစါရင်းရှိထားပြီးပြီ။ နေတိုးကလည်းအဆင်သင့်ပဲတဲ့။မယုံရင်စမ်းကြည့်
Morn Razagree on July 1, 2012 at 10:27 am
Burma and Myanmar are the same (see the below link). So, need to findasuitable term to represent all the nationalities of the nation.
minkoko on July 1, 2012 at 3:24 pm
လေးစားပါတယ် ဆရာတူမောင်ညို ခင်ဗျာ- တူမောင်ညို ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ အမြဲစောင့်ဖတ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ရေးသားပါ- အားပေးလျှက်ပါ။
မောင်လူအေး on July 1, 2012 at 9:58 pm
Tin Aung on July 3, 2012 at 8:03 am
Our wise statemen had changed the colonial names of towns, places, streets, etc. to appropriate Burmese names after gaining inpendence. 2nd March 1962 was day of shame for our country. All the names of places, towns, streets, etc. changed after that day by successive military juntas should be reinstated back. It is to acknowledge the wisdom of our statemen in democratic government and to show defiance to the successive military junta.